Säpo oo adeegsan karin farsamooyinka laga adeegsado waddamada kale si loo jooji socdaalka jihaadiyiinta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Säpo oo adeegsan karin farsamooyinka laga adeegsado waddamada kale si loo jooji socdaalka jihaadiyiinta
La daabacay onsdag 15 januari 2014 kl 15.41
Farsamooyinka ay adeegsadaan waddamada qaar si ay looga hor istaago jihaadiinta u socdaalaya waddamada dagaalada ka socdaan sida Soomaaliya iyo Suuriya oo ay kamid yahiin in lagalo noqdo dhalashada iyo baasaboorada ama fal-dibiyeed laga dhigo ka qayb galka tabobar argagxisnimo ayaan aheyn kuwo Iswiidhen looga dhaqmi karo, sidaas waxaa yeri agaasimaha guud ee heyadda amniga Säpo Anders Thonberg.
- Haa waddamda qaarkood waxaa la is-ticmaalaa farsamooyin kalo gedisan oo looga hortago in loo socdaalo jihaad laakiin waa mid ka fog sida looga arko Iswiidhen in ay bulshada demokaarti ah u dhaqmi karto. Annaga hadaan nahey heyadda amniga waxeyno adeegsanaa sharruucda iyo xeerarka barlamaankeeno dejiyo ayaga ayaana raacnaan, ayuu yeri.
Tan iyo sannadkii 2011 tirooyin badan oo Yurubiyaan Muslim ah ayaa u socdaaley dalka Suuriya si ay uga barbar dagaalamaan falaagooyinka xukumada dalkas ku kacsan. Iswiidhen keliya waxaa ka socdaaley ruuxyo tiradooda lagu qiyaasey todobaatameeyo kuwaas oo ku biirey kooxaha xiriirka laleh ururka argagaxidaha ah ee al-qaacida ee ka dagaalama dalkas Suuriya, sidas uu sheegey madaxa heyadda. Sidoo kale illa 2006 sodan-meeyo ruux ayaa u socdaashey Soomaaliya si ay uga barbar dagaalamaan Islaaminyiinta xag jariinta ah ee ka dagaalama koonfurta dalkas. Tobanneeyana waxey u socdaalen Afghanistan iyo Pakistan halka tiro aan sidaas u badneyn u socdaalen Ciraaq iyo Yeman.
Hadaba si looga hortago dadka u socdaalaya waddamada ay dagagaalada ka taagan yahiin si ay ugu barbar dagaalamaan kooxa argagaxisada ah ayey dowladdaha qaarkodo u maraan farsamooyin kalo gedisan, sida in lagalo noqdo dhalashada iyo baasaboorada iyo weliba in ku biirista kooxahas laga dhigo fal-denbiyeed.
Qiiyasteena weeraro Iswiidhen kama qorsheynayaan
Laakiin heyadda nabad sugida Iswiidhen Säpo ayaa sheegtey in farsamooyinka noocas ah aysan heyn kuwo dalkan looga dhaqmi karo oo sharuucda dalkan sidaas diidan tahay. Anders Thonberg madaxa Säpo ayaa sheegey in heyaddiisa ay sameyso sirdoon si wax looga ogaado in dadkan kuwooda dalkan ku soo guriyo noqda ay qorsheynayaan weeraro ama taageeraan falal agagaxiso oo kamid noqon karto maalgelin iyo qoris. Waxuuna sheegey in qiyaastooda ay tahay in hadda inta badan dadka soo guriyo noqda aysan qorsheyneynin weeraro ay ka geystaan gudaha Iswiidhen.